November | 2011 | Rev.U Min Lwin
ကိုယ်တော်နဲ့ လျှောက်လှမ်းဘို့ လုံလောက်တဲ့ ယုံကြည်ခြင်း သင့်မှာ ရှိပါသလား။
Posted by ဦးမင်းလွင် on 08/11/2011
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ယာဣ႐ု, ယံုၾကည္ျခင္း, ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း.	Leaveacomment
ကျမ်းပိုဒ် = မာကု ၅း၂၁-၄၃
ဒီတရားဟောချက်ဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အတူ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကျမ်းပိုဒ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ မတူညီ သီးခြားစီ ရပ်တည်နေ ကြတဲ့ အဖြစ်အပျက် နှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ထိုအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုသည် တစ်နေ ရာတည်းတွင် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ တွေ့ကြုံကြ ရလေသည်။ ထိုနှစ်ခုအကြားတွင် သခင်ယေရှုနှင့် တွေ့ကြုံ ဆက်နွှယ်နေသည် အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းသွား ပါမည်။
ပထမဦးစွာ ယာဣရုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ သူဟာ တရားဇရပ်မှူးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အမှုတော်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏ လူမျိုးစုများအကြားတွင် အလွန်အလုပ်များ ပြီး အလွန်ကြီးမား များပြားသော တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေရသည်။ နှုတ်ခပတ်တော်ကို ယုံကြည်လေးစား အားကိုးသော ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အမှုတော်အတွက် မိမိအသက်တာကို ဆက်ကပ်ထားသော ယုံကြည်သူတဦးပါ။ အထူးသဖြင့် ထာဝရဘုရားကို ယုံကြည်ကိုးစားသောသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
သူသည် နေ့တိုင်းအစဉ် တပါးသူများ၏ ပြဿနာများကို ကူညီနေရသူ တစ်ဥိး ဖြစ်ပါသည်။ တရားဇရပ်တွင် နာမကျန်းသူများ၊ မေတ္တာငတ်နေသူများဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပြဿနာ ရှိသူ၊ ဒုက္ခခံစားနေရသူများအကြားတွင် အမှုတော် ထမ်းဆောင်ရန် ဘုရားသခင်က ရွေးကောက်ထားသည်။ အမှုတော်ဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သောကြောင့် အိမ်တွင်လည်း ဧည်သည်များနှင့် အမြဲ ပြည့်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ဤမျှ လေးစားစရာကောင်းသော အမှုတော်ဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ယာဣရုသည် သူကိုယ်တိုင် ပြဿနာ တစ်ခုကို ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရ လေတော့သည်။ သူတပါး ကျန်းမာလာဘို့ ဆုတောင်းပေးရလေ့ ရှိသော အမှုတော်ဆောင်ကြီး ယာဣရုသည် သမီးဖြစ်သူ၏ ကျန်းမာရေး ဆိုးရွားမှုကို တွေ့ကြုံ ခံစား လာရသည်။ ဘခင်တဦးအတွက် မည်သို့မျှ ဖြေသိမ့်လို့ မရနိုင်ပါ။ အလွန်ငယ်ရွယ်သေးသည့် သမီးငယ်တွင် ဆရာဝန်၏ ဆေးစစ်တမ်း အရ မကြာခင် သေဆုံးရတော့မည်။ သိသလောက် ကြိုးစား ကုသခဲ့သော်လည်း ဆရာဝန်၏ နောက်ဆုံး အဖြေကြောင့် တုန်လှုပ် ချောက်ခြားရပါတော့သည်။ အခြား နည်းလမ်းတစုံတစ်ရာများ ရှိနေပါသလား။
မိဘအချို့တို့သည် ဤကဲ့သို့ အခြေအနေ တွေ့ကြုံလာပါက ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်ကာ စိတ်ခံစားမှု များပြားလွန်းသဖြင့် ဘာလုပ်၍ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိ ဖြစ်နေလေတော့သည်။ အချို့က ဘုရားသခင်ကို အပြစ်တင်မည်။ တချို့က မိမိကိုယ်ကို မိမိ အပြစ်တင်မည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သား သမီးများရှိသည့် ဘခင်တဦး ဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ်ခြင်းစာမိသည်။ မည်မျှ ကြီးမားသော စိတ်ခံစားမှု များနှင့် နဘမ်းလုံးနေမည်ကို သင်ကိုယ်တိုင် စိတ်ထဲတွင် မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
နောက်ဆုံးတော့ သူဟာ ဘုရားသခင်ကို အားကိုးကာ ဆုတောင်လိုက်သလားဟု ကျွန်တော်တွေး မြင်ကြည့်လိုက်သည်။ “ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ်တော်ရဲ့ အမှုတော်မြတ်မှာ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ကျွန်တော့်ကို လမ်းပြပါ။ ကိုယ်တော်ရဲ့ လမ်းပြ သွန်သင်မည့် အရာကို ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကို သနားတော်မူပါ။”
အဲဒီလို ဆုတောင်းလိမ့်မလားလို့ ကျွန်တော် တွေးကြည့်မိပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို လမ်းပြလိုက်သည်။ သူသည် တစ်စုံတစ်ရာကို သတိရမိလိုက်သည်။ သူ၏ တရားဇရပ်တွင် ဂျူးလူမျိုး ယုံကြည်သူတွေ ပြောနေသော လူငယ် တရားဟော ဆ၇ာလေးလား၊ ပရောဖတ်လားမသိ၊ ထိုတစ်ယောက်ကို သတိရလိုက်သည်။ ထိုလူငယ်လေး ယေရှုသည် ဘာသာရေးဆရာတွေ၊ ကျမ်းတတ်တွေရဲ့ အမြင်ကို ပြောင်းလဲဘို့ ကြိုးစားနေသူ တစ်ဦးအဖြစ် ပတ်ဝန်ကျင်တွင် ပြောနေကြသည်။ ထို ယေရှုဆိုသော လူငယ်လေးသည် တရားဇရပ်များတွင် ရဲဝင့်စွာ တရားဒေသနာ တွေ ဟောပြောနေဟု ကြားဘူးသည်။ အချို့ မြို့များတွင် တရားဟောသည့်အခါ တစ်မြို့လုံး ကုန်မတတ် သွားကြသည်ကို ကြားဘူးသည်။ အထူးသဖြင့် ထိုလူငယ်လေးသည် ကျန်းမာခြင်းကို ပေးကြောင်း ကြားသိနေရသည်။ သူ့အားဖြင့် ကျန်းမာသွားကြသော လူများ အလွန်များပြားလှကြောင်း ကြားသိဘူးပါသည်။
သူသည် မွေးကတည်းကပင် ခြေလက်သေနေသူများကို အကောင်းပကတိ ပြန်လည်ဖြစ်စေသည်။ သင်းချိုင်းမှာ နတ်ဆိုးစွဲနေသော သူကိုလည်း ပြန်လည် ကောင်းမွန်စေသည်။ မင်္ဂလာဆောင်မှာလည်း ရေကို စပျစ်ရည်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အမျိုးစုံအောင် ထိုယေရှုဆိုသော လူငယ်လေး၏ သတင်းကို ကြားသိ နေရသည်။ ထိုလူငယ်သည် အမှန်တကယ် ပရောဖတ်လား။ တတ်ရောင်ကား ဆရာကြီးလားမသိ။ သို့သော်လည်း ကြားသိသလောက် ပြန်လည် သုံးသပ်ရသော် သေအံ့ဆဲဆဲ ဖြစ်သော သမီးအတွက် ကူညီနိုင်သောသူ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသည်။
ထိုနောက် ယာဣရုသည် သခင်ယေရှုကို မည်သို့ စုံစမ်းလိုက်သည်ကို ကျွန်တော်မသိပါ။ တရားဇရပ်မှူး သိလာခဲ့သည်မှာ ဒီနေ့ ဒီမြို့ကလေးကို သခင်ရောက်လာမည်။ သူကိုယ်တိုင် သွားရောက် ပင့်ဖိတ်လိုက်မည်ဟု ပြင်ဆင်နေပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် လှေပေါ်မှ ဆင်းလျှင်ဆင်းခြင်း များပြားလှသော လူအုပ်ကြီးသည် ကိုယ်တော်ကို စောင့်နေလျှက် ရှိပါသည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် အလွန်များပြားသော လူအုပ်ကြီးဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ကျမ်းစာထဲတွင် သခင်ယေရှုအနားတွင် ယာဣရု ရောက်ရှိနေပါပြီ။ လူအုပ်ကြီးသည် ကိုယ်တော်၏ အနားတွင် တိုးကြိတ်လျှက် ရှိပါသည်။ သူသည် ကိုယ်တော် သခင်ယေရှုထံ ၀င်ရောက်ကာ “သခင် အားပါသလား၊ အားလျှင် ကျွန်တော်၏အိမ်သို့ ကျေးဇူးပြု၍ လိုက်ပေးပါ။” စသည်ဖြင့် မေးမြန် ခြင်းမပြုတော့ဘဲ အိမ်သို့ လိုက်လာပါရန် တောင်းဆိုလေတော့သည်။
ကျွန်တော် သေချာပေါက် ပြောနိုင်သောအရာ တစ်ခုတော့ရှိပါသည်။ ဤဖခင်ကြီးသည် သခင် ယေရှုနှင့် မတွေ့ခင် ကြိုတင် စဉ်းစားထားသည်။ သခင်နှင့် တွေ့လျှင် မည်သို့ ပြောဆိုရမည်ကို တွေးထားသည်။ ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့စွာ ပြောမည်၊ တောင်းပန်ပြီး ပြောဆိုမည်။ သို့သော် ကျွန်တော် တို့၏ တွေးခေါ် စဉ်းစားထားသမျှတို့သည် သခင်ယေရှု နှင့်တွေ့သောအခါ ပြတင်းပေါက် အပြင်ဘက်သို့ ထွက်စဉ် ပျောက်ဆုံးသွားလေတော့သည်။ သခင်ယေရှုကို တွေ့သည်နှင့် မျက်ရည် များက အလိုလို စီးဆင်းလာကာ အမှုတော်ဆောင် တဦး၏ ဣဒြေ သိက္ခာများပင် အလိုလိုမဆည်နိုင် တော့ဘဲ ခြေတော်ရင်းတွင် ဒူးထောက် ဦးညွှတ်ခြင်းဖြင့် ကူညီမှု ပြုပါရန် တောင်းဆိုလာ လေတော့သည်။ သခင်က အဖြေမပေးပါ။ အထပ်ထပ် တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဘခင်ဖြစ်သော တရားဇရပ်မှူးက မည်မျှယုံကြည်ကြောင်း ပြောဆိုနေသော်လည်း ကိုယ်တောသည် သူ၏ ယုံကြည်ခြင်းကိုတော့ စမ်းသပ်လိုပါသေးသည်။ သူ၏ တောင်းဆိုမှုကို ကိုယ်တော်က မည်သို့ မျှ ပြန်လည် တုန့်ပြန်မှု မပြူခဲ့ချေ။ သို့သော် သူခေါ်ရာသို့ ချက်ချင်းလိုက်ပါခဲ့ကြောင်း ကျမ်းစာတော် မြတ်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘခင်၏က တောင်းဆို လွန်းအားကြီးသော ကြောင့် လိုက်လာခဲ့သည့်တိုင် သူ၏ ယုံကြည်ခြင်း ကို မည်သို့မျှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း မရှိချေ။ ကျမ်းစာကို ပြန်လည်လေ့လာကြည့်ပါ။ အခန်းငယ် (၂၄)တွင် “ကိုယ်တော်သည် သူနှင့်အတူ သွား၍…..” ဟူသော အသုံးအနှုံးကို တွေ့ရပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကောင်း၏ ဆိုး၏ မည်သို့မျှ ပြန်လည်တုန်ပြန်မှု မပြုဘဲ ချက်ခြင်းလိုက်လာခဲ့သည်ကို မြင်တွေ့ရပါသည်။
ဤနေရာတွင် ယာဣရု၏ ခံစားမှုမှာ အားရကျေနပ်နေကြောင်း သိမြင်နိုင်ပါသည်။ သူဖိတ်ကြား လိုက်သည့် ခဏမှာပင် ကိုယ်တော်က ချက်ခြင်းလိုက်လာခဲ့သည်မှာ အလွန် ၀မ်းမြောက်ဘွယ်ရာ ဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလော။ သို့သော် ဆက်လက်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ကိုယ်တော်မြတ်သည် လမ်းခရီးတွင် လူအလွန်များသောကြောင့် တားဆီး ပိတ်ဆို့မှုကို ခံနေရသည်။ သခင်ယေရှုသည်လည်းကောင်း၊ ယာဣရုသည်လည်းကောင်း၊ တပည့်တော်များသည် လည်းကောင်း လမ်းတွင် ကြီးမားသော လူအုပ် ကြီးကို ကျော်ဖြတ်ရသည်မှာ မလွယ်ကူလှချေ။
ထိုအချိန်တွင် ရောဂါသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် လှို့ဝှက်စွာလာ၍ ကိုယ်တော်၏ အ၀တ်တော်ကို တို့ထိလိုက်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တို့ထိလိုက်ပါသည်။ သခင်သည် ပတ်ဝန်း ကျင်ကို လှည့်ကြည့်ပြီးနောက် တရားခံကို ရှာဖွေလိုက်သည်။ မေးခွန်း တစ်ခု မေးလိုက်သည်မှာ “ငါ့ကို ဘယ်သူ ထိသနည်း”။ တပည့်တော်များက ကိုယ်တော်ကို ပြန်လည် ပြောဆိုလိုက်သည်မှာ “ကိုယ်တော်ရယ် ဒီလောက် လူတွေများနေတာ ကိုယ်တော့်ကို ထိတာ အဆန်းလား၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ထိမိမှာပေါ့။” သို့သော် ကိုယ်တော်က ပြန်လည် ပြောဆိုလိုက်သည်မှာ “မဟုတ်ဘူး။ ငါ့ကိုယ်က တန်ခိုးထွက်တယ်”
တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော “တစ်ယောက်ယောက်က ငါ့ရဲ့ စွမ်းရည်တွေကို အမှီပြုပြီး တစ်ခုခု လုပ်သွားတယ်။” ဟူ၍ ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ယခု ဖခင်တဦး၏ ခံစားချက်ကို တခါပြန်လည်ကြည့်ကြပါဦးစို့။ သူသည် မိမိ၏ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေး သေမင်းတံခါးဝသို့ ရောက်ခါနီးဆဲဆဲတွင် ကြံရာမရ စိတ်ဂယောင်ခြောက်ခြား ဖြစ်ကာ သခင်ယေရှုထံသို့ အတင်း လူအုပ်ကြီးကို ဖြတ်ပြီး တောင်းပန်မှုပြုခဲ့ရသည်။ သူသည် ကိုယ်တော်ကို အလျှင်အမြန် အိမ်သို့ ခေါ်သွားချင်သည်။ ခဏလေးတောင်မှ အချိန်မဖြုန်းချင်ပါ။ အိမ်ကို မြန်မြန်ရောက်ဘို့လိုသည်။ သမီးလေး အသက်မသေမီ ကိုယ်တော်က ကြိုတင်ရောက်မှ ဖြစ်လိမ့်မည်။ သမီးလေး၏ အခြေအနေမှာ အချိန်မရွေး သေဆုံးသွားနိုင်သည်။ ကြည့်ပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် လမ်းခရီးတွင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ရောက်လာကာ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တို့ထိသည်ဟု ဆိုကာ သခင်ထံမှ သခင်၏ စွမ်းရည်များကို တိတ်တခိုး ယူဆောင်လေသည်။ ထိုသို့ သူမ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ကိုယ်တော်ကလည်း သဘောကျ နှစ်ခြိုက်နေပုံ ရပါသည်။ လမ်းခရီးတွင် ကိုယ်တော်က လူမှုရေး အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်နေပြန်ပါသည်။ ထိုအရာများ အားလုံးကို ယာဣရု မြင်တွေ့နေရပါသည်။ စိတ်မရှည်နိုင်တော့ပါ။ သူ့ကိစ္စက ပိုအရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါလော။ စိတ်ထဲတွင် တွေးနေသောအရာ များစွာ ရှိနေပေလိမ့်မည်။
ဒီအမျိုးသမီက ခံစားနေရတာ (၁၂)တောင်ရှိနေပြီး။ သေလောက်တဲ့ ပြဿနာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်သမီးက တကယ်သေရမည့် အချိန်ရောက်နေပြီ။
ကျွန်တော်က ကိုယ်တော့်ထံမှာ အရင်ရောက်တဲ့သူပါ။
ကျွန်တော့်အိမ်ကို အရင်လိုက်ပြီး သမီးကိစ္စကို အရင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ပြဿနာကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
ဒီအမျိုးသမီက မသန့်ရှင်းပါဘူး။ ဒီနေရာတောင် မရှိသင့်ပါဘူး။
ဒီအချိန်မှာ ၀တ်ပြုရာကျမ်းထဲက ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုမှာ သွေးထွက်နေတဲ့ ဒီမိန်းမဟာ မသန့်ရှင်း ဘူးလို့ ဖော်ပြထားတယ်မဟုတ်လား။
ပညတ်တော်အရဆိုလျှင် ဒီမိန်းမဟာ ကျောက်ခဲနဲ့တောင် ပေါက်ပြီး သတ်ရမယ်မဟုတ်လား။
ယခုကဲ့သို့ ကြန့်ကြာနေခြင်းကို သင်မည်ကဲ့သို့ ထင်မြင်သည်ကို ကျွန်တော်မသိပါ။ ကျွန်တော့်ထံတွင် ထိုကဲ့သို့ ကြန့်ကြမှုများအတွက် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းစရာတွေ ရှိနေပါသည်။ ထိုကြန့်ကြာမှုထဲတွင် သင်ယူစရာပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ရာထူးတတ်ဘို့ တစ်စုံတစ်ခုသော အချိန်ကို စောင့်ရသည် မဟုတ်လော။ ကျန်းမာခြင်းဆိုတာကို ရနိုင်ဘို့ တစ်စုံတစ်ရာသော အချိန်ကို စောင့်ရသည် မဟုတ်ပါလော။ ပြဿနာတွေ ပြေလည်ဘုိ့ တစ်စုံတစ်ရာ အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းရသည် မဟုတ်ပါလော။ ထိုကဲ့သို့ စောင့်ဆိုင်းရသည့် (နှောင့်နှေးနေရသည့်) အချိန်ကြုံ လာတိုင်း မိမိ အခြေအ နေများကို ပြန်လည် စစ်ဆေးခွင့် ရနိုင်သည်မဟုတ်ပါလော။ လူတို့၏ စိတ်သဘာဝအရ ပြဿနာ၊ အဆင်မပြေမှုများ ကြုံတွေ့လာပါ အလျှင်အမြန် ပြေလည်ချင်ပါသည်။ ထိုသို့ မပြေလည်သည့် တိုင်အောင် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကတော့ လုံလောက်လျှက် ရှိသည်ဟု ကျွန်တော် ဆိုချင်ပါ သည်။
ယခုကဲ့သို့ စောင့်ဆိုင်းနေရသော ယာဣရု၏ ဘ၀ထဲတွင် သူ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို တဆင့်မြင့်လာနိုင်မည့် အခြေအနေကို တွေ့ကြုံခွင့်ရပါသည်။ သူ၏ ပုံမှန်ဖြစ်ရမည့် အစီအစဉ်ထဲတွင် တစ်ဆယ်နှစ်နှစ်ပတ်လုံး သွေးသွန်ရောဂါစွဲနေသည့် မိန်းမက ၀င်ရောက်နေရာယူသွားသည်။ ထိုမိန်းမသည် ငွေတွေကုန်ပြီး ဆေးသမား (ဒေါက်တာ) စုံနေသော်လည်း ရောဂါက ပျောက်ကင်းသွားခြင်း မရှိချေ။ ကျမ်းစာက ပြောသည်မှာ ရောဂါ ပိုဆိုးလာသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှုသည် တန်ဘိုးရှိလှသော အချိန်များကို သေအံ့ဆဲဆဲဖြစ်သော သမီးဖြစ်သူအတွက် အသုံးပြုရမည့်အစား ပညတ်တော်အရ အပြစ်ရှိပြီး ပယ်ထားရမည့် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်အတွက် အသုံးပြုနေသည်။
ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှုသည် လူပုဂ္ဂိုလ်များကို အားနာမှု လုံးဝမရှိကြောင်း သက်သေပြလျှက် ရှိပါသည်။
ကိုယ်တော်သည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများ၊ အရာရှိများကိုလည်း ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်စေရန် ကြည့်ရှုသည်။ ဂရုစိုက်သည်။
ကိုယ်တော်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အပယ်ခံများကိုလည်း ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်လာစေရန် ကြည့်ရှုသည်။ ဂရုစိုက်သည်။
ကိုယ်တော်သည် ယာဣရု၏ ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်း တုန့်ပြန်မှုပြုသလို၊ ဆင်းရဲသား အပယ်ခံ မိန်းမတစ်ဦး၏ ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်း ဂရုစိုက်ခဲ့သည်။
ကိုယ်တော်သည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသောသူများ သက်သက်ကိုသာမကြည်ဘဲ အခြေအနေအားလုံး အတွက် ကြည်ရှုပေးသည်မှာ သေချာလေသည်။
လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း ရှိသောသူတိုင်းကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ယာဣရုအကြောင်း ဆက်လက်ကြည့်ကြပါစို။ သူသည် အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်း ခံစားနေရမည်မှာ သေချာပါသည်။ သူအားကိုး မြှော်လင့်ယုံကြည်သော ခရစ်တော်၏ အစွမ်းအစကို မြင်သောအခါ အလွန်အားရ ကျေနပ်လျှက် ရှိသည်။
သူ၏ ၀ိညာဉ်သည် လေထဲမှာ ၀ဲလွှင့် ပျံသန်းနေသယောင် ပေါ့ပါး လန်းဆန်းနေလိမ့်မည်။ သူ့ကိုယ်သူလည်း သခင်၏ ကျန်မာခြင်း တန်ခိုးတော်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး သက်သေခံလျှက် ရှိနေပါသည်။ ယခုအခါ မိမိသမီး၏ ကျန်မာရေး အတွက် စိတ်ချမှု အပြည့် ရှိသွားပါပြီး။ သို့သော် စာတန်သည် သတင်းကောင်းအတွက် ၀မ်းမြောက်လျှက် ရှိသောသူတို့ကို ကြာကြာ ၀မ်းမြောက်နိုင်သော အခွင့် မပေးခဲ့ချေ။ သတင်းစကားတခု ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုသတင်းစကားကြောင့် ကျောက်တုံကဲ့သို့ ခိုင်ခန့်နေသော သူ၏ ကမ္ဘာလေးသည် ရုတ်တရက် ဆပ်ပြာဘူဘောင်းလေးပမာ လွှင့်စင် ပျောက်ပျက်သွားခဲ့လေသည်။
သခင်ယေရှုသည် ထိုအမျိုးသမီးနှင့် စကားပြောနေခိုက် ယာဣရု၏ အိမ်မှ လူတစ်ယောက် ရောက်ရှိ လာပြီး သတင်းစကားတစ်ခု ပေးပို့လာသည်။ ထိုသတင်းစကားမှာ “ကိုယ်တော်၏ သမီး သေဆုံး သွားပါပြီး။ သခင့်ကို ဒုက္ခမပေးပါနဲ့တော့။” ထိုသတင်းစကားကို သခင် ယေရှု ကိုယ်တိုင်လည်း ကြားခဲ့ လေသည်။ ထိုအခါ တုန်လှုပ် ချောက်ခြားနေသော ဘခင်ဘက်သို့ လှည်ပြီးနောက် ရုတ်တရက် ပြောလိုက်သော စကားသည်ကား “မကြောက်ပါနဲ။ ယုံကြည်ခြင်း တခုသာ ရှိပါလော့” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ “လုံးဝ မတုန်လှုပ်ပါနှင့်။” ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစကားကို သခင်ယေရှုသည် သတင်းဆိုးကို ရုတ်တရက် ကြားလိုက်သည့် ခဏခြင်းတွင် ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သမ္မာ ကျမ်းစာက ပြောဆိုထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မကောင်းသော သတင်း တစ်စုံ တစ်ရာကို ကြားပြီ ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည် ခြင်းသည် အမြဲတမ်း ကျဆင်း သွားလေ့ရှိသည်။ သို့သော် သခင်သည် ကျွန်တော်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်း ကို အနည်းငယ်မျှပင် လျော့နည်းရန် အလိုတော် မရှိချေ။ သတင်းဆိုး ကြားသည်နှင့် တပြိုင်နက် ကိုယ်တော်သည် ချက်ခြင်း တုန့်ပြန်လိုက်သည်မှာ “မကြောက်နှင့်။ ယုံကြည်ခြင်း တခုသာ ရှိစေလော့။” ဟူ၍ ချက်ခြင်း တုန့်ပြန်ခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် သတင်းဆိုးကြားသည်နှင့် တပြိုင်နက် နှုတ်ခပတ်တော်က ဘာပြောသလဲ ဆိုသည်ကို ချက်ခြင်း ရှာဖွေဘို့ လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် လူတို့သည် သတင်းဆိုး ကြားသည့်အခါတိုင်း အောက်ပါ အပြုအမူတို့ဖြင့် တုန့်ပြန်လေ့ ရှိပါသည်။
တစ်ဦးကို တစ်ဦး အပြစ်တင်ကြမည်။
တယ်လီဖုန်းဆက်ကာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အကြောင်းကြား အကူအညီယူမည်။
မိမိကိုယ်ကို မိမိ အပြစ်တင်မည်။
ယုံကြည်သူဆိုပါက အထက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ပြီးမှ သခင်ယေရှုကို သတိရမည်။ နောက်ဆုံးအချိန်ကျမှ အရေးကြီးသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင် ယေရှုထံတွင် နှုတ်ခပတ်တော်အားဖြင့် ခွန်အားယူကြမည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ သခင်ယေရှုထံတွင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ၀မ်းမြောက်စရာ သတင်းစကားနှင့် နှစ်သိမ့်ခြင်း စကားများ ရှိနေပါသည်။
ယာဣရု အနေဖြင့် သခင် ယေရှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ခံစားမိသော ယုံကြည်ခြင်း တရား အချို့ ရှိနေပါသည်။ သေခြင်းတရား ဆိုသည်မှာ ဖျားနာခြင်း ဆိုသောအရာထက် ပိုမို စိမ်ခေါ်နေသော အချက် တချက် မဟုတ်ချေ။ သခင့်ထံတွင် တန်ခိုးရှိနေသည် ဆိုခြင်းကြောင့် ထွက်ခွာသွားသော အသက်ကိုလည်း ပြန်လည် ပေးစွမ်းနိုင်ပါ သည်။ ယုံပါသည်။ သခင့်ထံတွင် ထိုအစွမ်းတန်ခိုးများ ရှိနေသည် မိမိ၏ သမီးကို ပြန်လည် အသက်ရှင်စေမည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက “မတုန်လှုပ်ပါနှင့်” ဟု ပြောလာသော စကားကို ယုံကြည်သည်။ သင့်ကိုလည်း သခင်ယေရှုက ပြဿနာ အသီးအသီးတွင် သူနှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းရန် တောင်းဆိုနေပါသည်။ ကိုယ်တော်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းရန် လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း ရှိနေပါသလား။”
သင်ကိုယ်တိုင် အောက်ပါ အဖြစ်အပျက်များ ရင်ဆိုင်လာရပါက သင်မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်း အသက်ရှင်ပါမည်နည်း။
သင်သည် ဆိုးသည်ထက် ဆိုးလာသော အခြေအနေတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်လာရပါက မည်သို့ လုပ်ဆောင်မည်နည်း။
သင်၏ အိမ်ထောင်ရေး ဆိုးသည်ထက် ဆိုးလာပါက သင်မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပါမည်နည်။
သင်၏ အလုပ်တွင် ဆိုးသည်ထက် ဆိုးလာပါက သင်မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပါမည်နည်း။
သင်၏ ကလေးများ ဆိုးသည်ထက် ဆိုးလာပါ သင်မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပါမည်နည်း။
သင်၏ ငွေရေးကြေးရေး အခြေအနေ ဆိုးသည်ထက် ဆိုးလာပါ သင်မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပါမည်နည်း။
သင်သည် မတရားသော စွပ်စွဲမှုများဖြင့် စွပ်စွဲလာပါက သင်မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပါမည်နည်း။
ဤနှုတ်ခပတ်တော် ဆင်ခြင်မှုအရ ကျွန်တော်ကို သခင်ပြောခဲ့သည်မှာ ကိုယ်တော်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းရန် လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း ရှိနေပါသလား။”။ ကျွန်တော်တို့ ရင်ဆိုင်နေရသော ဆိုးသည်ထက် ဆိုလာသော အခြေအနေတခုကို ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ခပတ်တော်က ပြောနေသော အရာကို သင်၏ နှလုံးသားထဲတွင် ထိုးဖောက် ၀င်ရောက်ခွင့် ပြုနိုင်ပါသလား။ ယာဣရုကို ပြောလိုက်သော စကားသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း ပြောနေသယောင် ခံစားမိပါသည်။ ကိုယ်တော်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းရန် လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း ရှိနေပါသလား။”
ယာဣရု၏ နှလုံးသားနှင့် စိတ်ခံစားမှုများကို သတင်းဆိုး မကြားမီကပင် ကြီးမားသော ယုံကြည်ခြင်းနှင့် တို့ထိ ခံစားပြီး ဖြစ်သောကြောင့် နောက်ထပ် ဖြစ်ပျက်လာမည့် အရာတို့အတွက် ကြိုတင် ခံစား ယုံကြည်ပြီး ဖြစ်ပေတော့မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိရမည့်အချက်တခုမှာ သခင်ယေရှုသည် မည့်သည့်အခါမျှ ဈာပန အစီအစဉ်များကို မပြုလုပ်ခဲ့ချေ။ သခင်ယေရှု၏ အစီအစဉ် ဇယားထဲတွင် သေခြင်း ဆိုသည်မှာ မရှိချေ။ ယခု ယာဣရု၏ အိမ်သို့ သွားရောက်သည့် အစီအစဉ်သည် ဈာပန အစီအစဉ် ပြုလုပ်ရန်မဟုတ်ကြောင်း နားလည်ထားပါ။ ဖခင် ကိုယ်တိုင်လည်း သိမည်ဟု ထင်ပါသည်။ သခင် အိမ်သို့ လိုက်လာခဲ့ခြင်းမျာ အသုဘ အစီအစဉ် ပြုလုပ်ရန် မဟုတ်ကြောင်း သိရှိနေပါသည်။
သခင်ယေရှုက ပြောနေပါသည်။ “ငါနှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းဘို့ လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း သင့်မှာ ရှိသလား” အခန်းငယ် ၂၄ ကိုကြည့်ပါ။ “ကိုယ်တော်သည် သူနှင့်အတူသွား၍ . . . ” အငယ် ၃၆ “မ ကြောက်ကြနှင့်။ ယုံကြည်ခြင်း တခုသာ ရှိစေလော့”
ကိုယ်တော်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းနေသ၍ “ကျွန်ုပ်တို့တွင် အချိန်နှောင်းသွားပြီ” “နောက်ကျသွားပြီ” “လွန်သွားပြီ” ဆိုသည့် စကားလုံးများ မရှိပါ။ ယာဣရု ကြားသိရသော သတင်းစကားသည် သတင်းဆိုး ဖြစ်သော်လည်း ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အတွက် အဆိုးထဲတွင် အကောင်းများ အစဉ်လွှမ်းမိုးလျက် ရှိသည်။ လူတို့သည် ယခုအချိန်တွင် ကိုယ်တော်ရောက်လာသော်လည်း အကျိုးမရှိဟု ခံစားယုံကြည်နေကြ သည်။ ကိုယ်တော်သည် ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် မည်သို့မျှ မတတ်နိုင်သောသူမဟုတ်။ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးတွင် တတ်နိုင်သော အရှင်ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလော။
ကိုယ်တော်သည် ယာဣရု၏ အိမ်သို့ ရောက်သောအခါ သေဆုံးသွားသော သမီးငယ်၏ အခန်းသို့ ၀င်ရောက်ကာ သမီးငယ်၏ လက်ကို ဆွဲကိုင်လျှက် “မိန်းမငယ်၊ ထလော့” ဆိုသည်နှင့် သေဆုံးနေသော မိန်းမငယ်လေးသည် ပြန်လည်ထမြောက်လာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်ပါ။ ယာဣရုသည် ခံစားရသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက် မည်မျှ ကျေနပ် ၀မ်းမြောက်နေပါမည်နည်း။
သင်၏ ဘ၀ အသက်ရှင်မှု ထဲတွင် ထိုကောင်းကြီး မင်္ဂလာကို ရယူ ခံစားနိုင်ပါသည်။ ယာဣရုသည် ဖြစ်ပျက်သမျှ အရာများကို ပြန်လည် စဉ်စားကြည့်လိုက်တိုင်း ကျေနပ်အားရ ၀မ်းမြောက်ခြင်းကို ခံစားရပေလိမ့်မည်။ မည်မျှပင် ပြဿနာ ဆိုးရွား ကြီးထွားနေစေကာမူ ကိုယ်တော်နှင့် လျှောက်လှမ်းလိုသော စိတ်နှလုံး အပြည့်အ၀ ရှိနေပါသည်။ ထိုစိတ်နှလုံးသည် ကိုယ်တော်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းလိုသည့် ယုံကြည်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ယာဣရုတွင် လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်မေးပါရစေ။ သင့်မှာ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းရန် လုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်း ရှိနေပါသလား။ ထိုမေးခွန်းကို ကိုယ်တော်က သင့်ကို မေးခဲ့လျှင် သင်မည်ကဲ့သို့ ဖြေပါမည်နည်း။
သခင်ယေရှုက သင့်ကိုပြောနေပါသည်။ ယနေ့ပင် နားထောင်ပါ။
မင်းငါနဲ့အတူလျှောက်လှမ်းဘို့ လုံလောက်တဲ့ ယုံကြည်ခြင်း ရှိသလား။ ငါဟာ သင့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပြန်လည်တည့်မတ် ကောင်းမွန်စေနိုင်သောသူ ဖြစ်တယ်။
မင်းငါနဲ့အတူလျှောက်လှမ်းဘို့ လုံလောက်တဲ့ ယုံကြည်ခြင်း ရှိသလား။ ငါဟာ သင့်ရဲ့ ငွေရေး ကြေးရေး ပြဿနာ တွေကို ပြန်လည် ကောင်းမွန် စေနိုင်သောသူ ဖြစ်တယ်။
မင်းငါနဲ့အတူလျှောက်လှမ်းဘို့ လုံလောက်တဲ့ ယုံကြည်ခြင်း ရှိသလား။ မင်းငါနဲ့ အတူ လျှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင် သေဆုံးနေတဲ့ မင်းရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေကို ပြန်လည် ထမြောက်စေမည့်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းငါနဲ့အတူလျှောက်လှမ်းဘို့ လုံလောက်တဲ့ ယုံကြည်ခြင်း ရှိသလား။ မင်းရဲ့ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ အလုပ်တွေကို ပြန်လည်အောင်မြင်စေနိုင်တဲ့ အရှင်ဖြစ်တယ်။
မင်းငါနဲ့အတူလျှောက်လှမ်းဘို့ လုံလောက်တဲ့ ယုံကြည်ခြင်း ရှိသလား။ မင်းကြည့်နေတဲ့ လောကအရာတွေဟာ အစစ်အမှန် တွေမဟုတ်ပါဘူး။
မင်းငါနဲ့အတူလျှောက်လှမ်းဘို့ လုံလောက်တဲ့ ယုံကြည်ခြင်း ရှိသလား။ မင်း နောက်ကျသွားပြီလို့ တွေးထင်နေတဲ့ အရာတွေဟာ မူလထက် ကောင်းမွန်ထက် အစီအစဉ်တွေနဲ့ ပြန်လည် လည်ပတ်စေမယ်။
မင်းရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းတွေ မပျောက်ဆုံးပါစေနဲ့။
သင့်ရဲ့ အမြင်ကို အားမကိုးပါနဲ့။ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ လျှောက်လှမ်းပါ။
အခြား ပတ်ဝန်းကျင်က ပြောဆိုနေတာတွေကို နားမထောင်ပါနဲ့။ ကိုယ်တော်ကိုသာ ယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့ အရာရာကို ရင်ဆိုင်လိုက်စမ်းပါ။